Bit By Bit - agba nwere - 4.6.1 Mepụta efu variable eri data
Isi ihe na-agba ọsọ dị ukwuu bụ iji ụgbọala gị gbanwee ihe efu. Ụzọ kachasị mma ime nke a bụ akpaaka na ịmepụta ihe ndị na-atọ ụtọ.
Nchọpụta nke Digital nwere ike ịnwe nnukwu ụlọ dị iche iche, nke a na-enyekwa ndị nchọpụta ohere ịnwale ihe ndị na-agaghị ekwe omume n'oge gara aga. Otu ụzọ isi chee echiche banyere ọdịiche a bụ ịmata na nyocha ahụ nwere ụdị ego abụọ a: akwụ ụgwọ na ụgwọ akwụ ụgwọ. Ọnụ ego a na-akwụ ụgwọ bụ ụgwọ na-agbanweghi agbanwe n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ nke ndị so na ya. Dịka ọmụmaatụ, na nyocha ụlọ nyocha, ọnụahịa efu nwere ike ịbụ ụgwọ nke ịgbazinye ohere na ịzụta ngwá ụlọ. Ọnụ ọgụgụ mgbanwe , n'aka nke ọzọ, gbanwee dabere na ọnụ ọgụgụ nke ndị so na ya. Dịka ọmụmaatụ, na nyocha ụlọ nyocha, ọnụahịa ndị na-agbanwe agbanwe nwere ike ịnweta site n'inye ndị ọrụ na ndị na-arụ ọrụ. N'ozuzu, nyocha ndị analog nwere obere ụgwọ na ọnụ ahịa dị elu, ebe nchọpụta dijitalụ nwere nnukwu ego efu na ụgwọ efu efu (nọmba 4.19). Ọ bụ ezie na ịnweta nyocha nwere obere ọnụahịa dị arọ, ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ohere na-akpali akpali mgbe ị na-achụpụ ihe agbanwe agbanwe na ụzọ niile efu.
Onyonyo 4.19: Atụmatụ nke owuwu ihe ndị dị na nyocha analog na dijitalụ. N'ozuzu, nyocha ndị analog nwere obere ụgwọ na ọnụ ọgụgụ dị elu ma ọ bụrụ na nyocha nke dijitalụ nwere ọnụ ahịa dị elu na ụgwọ akwụ ụgwọ dị ala. Ebube dị iche iche dị iche iche pụtara na nyocha dijitalụ nwere ike ịgba ọsọ n'ọtụtụ na-agaghị ekwe omume na nyocha nke analog.
Enwere isi ihe abuo nke ego efu-ego nye ndi oru na ugwo nye ndi ozo-na nke obula n'ime ha puru ime ka ha ghara iji usoro di iche. Nkwụnye ụgwọ ndị ọrụ na-esi na ọrụ ndị nyocha na-enyere ndị na-enyere ndị ọrụ aka aka, na-ebute ọgwụgwọ, na ihe nlele. Dịka ọmụmaatụ, nchọpụta analog nke Schultz na ndị ọrụ ibe (2007) na ọkụ eletrik chọrọ ndị na-enyere aka nyocha iji gaa n'ụlọ ọ bụla iji wepụta ọgwụgwọ ma gụọ mita eletrik (nọmba 4.3). Mgbalị a niile site na ndị na-enyere aka nyocha pụtara na ịgbakwunye ezinụlọ ọhụrụ na ọmụmụ ihe ahụ ga-agbakwunye ụtụ. N'aka nke ọzọ, maka nchọpụta dijitalụ nke Restivo na van de Rijt (2012) maka mmetụta nke nrite na ndị editọ Wikipedia, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịgbakwunye ndị na-eso ya na ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ego ọ bụla. Usoro izugbe maka ịkwụsị ụgwọ ịkwụsị mgbanwe bụ iji dochie ọrụ mmadụ (nke dị oké ọnụ) na ọrụ kọmputa (nke dị ọnụ ala). O siri ike, ị nwere ike jụọ onwe gị, sị: Nke a nwere ike ịgba ọsọ mgbe onye ọ bụla nọ n'ìgwè egwuregwu m na-ehi ụra? Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, ị meela nnukwu ọrụ nke aka.
Ụdị nke abụọ nke agbanwe agbanwe bụ ịkwụ ụgwọ nye ndị na-eso ụzọ. Ụfọdụ ndị nchọpụta ejirila Amazon Mechanical Turk na ụlọ ahịa ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ịntanetị iji belata ịkwụ ụgwọ ndị a chọrọ maka ndị na-agụ ya. Ịchụpụ ụgbọala na-akwụ ụgwọ niile na-efu efu, Otú ọ dị, ọ dị mkpa ịchọta ụzọ dị iche iche. Ruo ogologo oge, ndị na-eme nchọpụta emeela nyocha ndị na-agwụ ike nke na ha nwere ịkwụ ndị mmadụ iji kere òkè. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta nnwale nke ndị mmadụ chọrọ ịbanye na ya? Nke a nwere ike ịbịaru nso, ma m ga-enye gị ihe atụ n'okpuru ebe m na-arụ ọrụ, ma e nwere ọtụtụ ihe atụ na tebụl 4.4. Rịba ama na echiche a nke ịmepụta ihe ndị na-atọ ụtọ na-eme ka ụfọdụ n'ime isiokwu ndị dị na isi nke 3 gbasara ịmepụta nyocha ndị ọzọ na-atọ ụtọ na isi nke 5 banyere nhazi nke mmekọ ọnụ. N'ihi ya, echere m na onye ahụ ga-enwe obi ụtọ-ihe pụkwara ịkpọ ahụmahụ nke onye ọrụ-ga-abụ akụkụ dị mkpa nke nchọpụta nyocha na afọ dijitalụ.
Isiokwu 4.4: Ihe Nlereanya nke Nleta na Ụgwọ Dị Iche Iche nke Ndị Na-eji Mmasị Na-arụrịta Ụgwọ Na-arụ ma ọ bụ Ahụmahụ Na-enye Ọṅụ.
Mkpokọta na ozi ahụike Centola (2010)
Mmemme mmega ahụ Centola (2011)
Egwu egwu Salganik, Dodds, and Watts (2006) ; Salganik and Watts (2008) ; Salganik and Watts (2009b)
Egwuregwu egwuregwu Kohli et al. (2012)
Nkwado vidio Harper and Konstan (2015)
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmepụta ahụmahụ na efu efu ọnụahịa, ị ga-achọ iji hụ na ihe niile na-arụnyere kpamkpam na ndị na-eso ụzọ adịghị achọ ọ bụla ịkwụ ụgwọ. Iji gosi otú nke a ga-esi kwe omume, m ga-akọwa nyocha m nyocha banyere ihe ịga nke ọma na ọdịda nke ngwaahịa omenala.
Ntugharị m kpaliri site na mgbagwoju anya nke ihe ịga nke ọma maka ngwaahịa omenala. Ịkpọ oku, akwụkwọ ndị kacha mma na-ere, na fim ndị na-emegiderịta onwe ha bụ ọtụtụ ihe, ọ ga-akacha mma karịa ọkara. N'ihi nke a, a na-akpọkarị ahịa maka ngwaahịa ndị a "ahịa ndị na-eto eto". N'agbanyeghị nke ahụ, n'otu oge ahụ, otu abụ, akwụkwọ, ma ọ bụ ihe nkiri ga-aga nke ọma bụ ihe a na-enweghị atụ. Onye na-ede akwụkwọ bụ William Goldman (1989) chịkọtara ọtụtụ nchọpụta agụmakwụkwọ site n'ikwu na, mgbe ọ na-abịa ịkọwa ihe ịga nke ọma, "ọ dịghị onye ọ bụla maara ihe ọ bụla." Ọhụụ nke ahịa niile na-eme ka m chee na ọ bụ ihe ịga nke ọma nke àgwà na ole bụ ọchịchị. Ma ọ bụ, gosipụtara dịtụ iche, ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịmepụta ụwa ndị yiri ya ma mee ka ha niile gbasaa onwe ha, otu abụ ahụ ọ ga-adọrọ mmasị na ụwa ọ bụla? Ma, ọ bụrụ na ọ bụghị, gịnị nwere ike ịbụ usoro nke na - akpata esemokwu ndị a?
Iji zaa ajụjụ ndị a, anyị-Peter Dodds, Duncan Watts (onye na-enye m ndụmọdụ nyocha), na m na-agbadoro ọtụtụ usoro nyocha n'ịntanetị. Karịsịa, anyị wuru ebe nrụọrụ weebụ a na-akpọ MusicLab ebe ndị mmadụ nwere ike ịchọpụta egwu ọhụrụ, anyị ejiri ya mee ihe maka usoro nyocha. Anyị wepụtara ndị na-eso ụzọ site n'ịgba mgbasa ozi ọkọlọtọ na ebe nrụọrụ weebụ nwere mmasị ụmụaka (nọmba 4.20) na site na mkpesa na mgbasa ozi. Ndị na-abịarute na ebe nrụọrụ weebụ anyị nyere ikikere nkwenye, mezue akwụkwọ ajụjụ dị mkpirikpi, ma nyefee ha n'ụzọ ọ bụla n'otu nnwale abụọ-nnwere onwe na mmekọrịta mmadụ. Na ọnọdụ onwe ya, ndị na-eme ha kpebiri ihe ha ga-egere, na-enye naanị aha nke agbụrụ na abụ. Mgbe a na-ege egwu, a jụrụ ndị na-agụ ya ka ha kwuo ya mgbe nke ahụ gasịrị ha nwere ohere (ma ọ bụghị ọrụ) ibudata egwu ahụ. Na ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na ibe, ndị nwere otu ahụ nwere ahụmahụ ahụ, ma ọ bụrụ na ha enwee ike ịhụ ugboro ole ebudatara egwu ọ bụla site na ndị na-aga n'ihu. Ọzọkwa, a na-enye ndị na-etinye aka na ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na otu n'ime ụwa asatọ dịka otu, nke ọ bụla n'ime ha wepụtara onwe ya (nọmba 4.21). N'iji ejiji a eme ihe, anyi gbaara nnwale abuo abuo. Na mbụ, anyị na-ewetara ndị na-esonyere ya abụ ndị a na-agụghị na ya, nke nyere ha ihe mgbaàmà na-adịghị ike nke ewu ewu. Na nnwale nke abụọ, anyị na-ewetara abụ ndị dị na ndepụta ndepụta, nke nyere ihe mgbaàmà siri ike nke ewu ewu (nọmba 4.22).
Onyonyo 4.20: Otu ihe atụ nke mgbasa ozi ọkọlọtọ na ndị ọrụ mụ na ndị ọrụ m na-akpọ ndị na-amụ ihe maka ihe egwu MusicLab (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Edeghachiri ya site na ikikere Salganik (2007) , Salganik (2007) 2.12.
Onu ogugu nke 4.21: Ebumnuche nke ihe omuma nke MusicLab (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . E kenyere ndị na-eso ụzọ na otu n'ime ọnọdụ abụọ: mmetụta onwe onye na nke mmadụ. Ndị so na ọnọdụ onwe ha mere nhọrọ ha n'enweghị ozi ọ bụla gbasara ihe ndị ọzọ mere. A na-enye ndị na-etinye aka na ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na otu n'ime asatọ dịka ụwa, ebe ha nwere ike ịhụ na a ma ama-dị ka atụle site na nbudata nke ndị na-aga n'ihu-nke ọbụ abụ ọ bụla n'ime ụwa ha, ma ha enweghị ike ịhụ ihe ọ bụla gbasara, ha ọbụna mara banyere ịdị adị, nke ọ bụla nke ụwa ndị ọzọ. E si Salganik, Dodds, and Watts (2006) , s1.
Anyị chọpụtara na ọdịbendị nke abụ ndị dị iche na ụwa, na-atụ aro na ọchịchị ahụ rụrụ ọrụ dị mkpa n'inwe ihe ịga nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, na ụwa ụwa, abụ abụ "Lockdown" site na 52Metro bịara na 1st nke 48 songs, mgbe n'ụwa ọzọ ọ bịara na 40th. Nke a bụ otu abụ ahụ nke na-akwado ụdị egwu ndị ọzọ, mana n'otu ụwa, ọ nwere ihu ọma na ndị ọzọ ọ bụghị. Ọzọkwa, site na iji atụnyere ihe gafee nyocha abụọ ahụ, anyị chọpụtara na mmetụta mmekọrịta mmadụ na-eme ka ụdị ahịa ahịa ndị a na-abawanye uru, nke nwere ike ịkọwa mkpa ọ dị na nkà. Ma, na-ele anya n'ụwa nile (nke a na-apụghị ime n'èzí nke ụdị nke ụwa a), anyị chọpụtara na mmetụta mmekọrịta mmadụ na eze na-eme ka ọ dịkwuo mkpa. Ọzọkwa, ihe ijuanya, ọ bụ abụ kachasị mma ebe ọ kachasị mma (nọmba 4.23).
Onyonyo 4.22: Ihuenyo site na ọnọdụ ndị metụtara mmekọrịta mmadụ na ndị ọkachamara na MusicLab (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . N'ihe mmetụta mmekọrịta mmadụ na ahụmahụ 1, a na-enye ndị na-eme ihe omume ahụ ka ha nwee ike ịhazi ihe dị na 16 \_(\_times\_) 3, ebe a na-enyefeghị ọnọdụ nke abụ ndị ọ bụla maka nke ọ bụla. onye so na ya. Na nnwale 2, ndị na-ekere òkè na ọnọdụ mmekọrịta mmadụ na eze gosipụtara egwu ndị ahụ, na nbudata nchịkọta, dị na otu kọlụm n'usoro na-agbada n'usoro nke ewu ewu ugbu a.
Nyocha 4.23: Ihe si na nyocha MusicLab na-egosi mmekọrịta n'etiti mkpesa na ihe ịga nke ọma (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . The \_(x\_) -axis bụ òkè ahịa nke egwu na ụwa nwere onwe ya, nke na-eje ozi dị ka ihe ụfọdụ nke arịrịọ ahụ, na \_(y\_) -axis bụ òkè ahịa nke otu abụ ahụ ndị mmadụ asatọ na-emetụta ụwa, nke na-arụ ọrụ dị ka ihe ịga nke ọma nke abụ. Anyị chọpụtara na ịba ụba mmetụta mmekọrịta ndị na-eso ụzọ-kpọmkwem, mgbanwe dị na nhazi site na nnwale 1 iji nweta nnwale 2 (nọmba 4.22) -nwere ihe ịga nke ọma ịghọ ihe a na-ejighị n'aka, karịsịa maka abụ ndị kachasị mma. E si na Salganik, Dodds, and Watts (2006) , ọ bụ 3.
MusicLab nwere ike ịgba ọsọ na-efu agbanwe maka ụzọ e si kee ya. Nke mbụ, ihe niile ejirila rụọ ọrụ nke ọma ka o wee nwee ike ịgba ọsọ mgbe m na-ehi ụra. Nke abụọ, ego a na-akwụ ụgwọ bụ egwu n'efu, ya mere, ọ dịghị onye na-akwụ ụgwọ ụgwọ ọ bụla. Iji egwu egwu eme ihe na-egosiputa otu e si eme mgbe ụfọdụ ịzụ ahịa n'etiti ego efu na agbanwe agbanwe. Iji egwu emeela ka ọnụ ọgụgụ a na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ n'ihi na m ga-eji oge wepụta ikike site n'aka ndị agha na ịkwadebe akụkọ maka ha banyere mmeghachi omume nke ndị na-ege òkè na egwu ha. Ma na nke a, ụba ego a na-akwụwanye iji mee ka ọnụ ọgụgụ ndị na-agbanwe agbanwe bụrụ ihe kwesịrị ekwesị ime; nke ahụ bụ ihe nyeere anyị aka ịmegharị nnwale nke dị ihe dị ka 100 ugboro karịa nyocha nke ụlọ nyocha.
Ọzọkwa, ihe ndekọ MusicLab na-egosi na ọnụahịa efu efu agaghị enwe njedebe n'onwe ya; kama nke ahụ, ọ pụrụ ịbụ ụzọ isi mee ụdị nnwale ọhụrụ. Rịba ama na anyị ejighị ndị niile so anyị na-agba ọsọ na-eme nchọpụta otu narị ugboro ugboro. Kama nke ahụ, anyị mere ihe dị iche iche, nke ị nwere ike icheta dịka ịgbanata site na nyocha nke uche na otu onye na-ahụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya (Hedström 2006) . Kama ilekwasị anya na mkpebi nke onye ọ bụla, anyị na-elekwasị anya nyocha anyị banyere ihe a na-ewu ewu, mmepụta nke otu. Ngbanwe a na nchịkọta nhọrọ pụtara na anyị chọrọ ihe dị ka mmadụ 700 ka ha wee mepụta otu data (e nwere mmadụ 700 n'ime ụwa ọ bụla). Enweghi ike ime ihe a n'ihi ugwo nke ugbo a. N'ozuzu, ọ bụrụ na ndị nyocha achọ ịma otú otu nkwekọrịta si esi ná mkpebi nke onye ọ bụla pụta, nchọpụta otu dịka MusicLab bụ ihe na-akpali akpali. Na n'oge gara aga, ha siri ike, ma nsogbu ndị a na-adajụ n'ihi na enwere ike ịnweta data efu efu.
Na mgbakwunye na ịkọwa uru nke data efu na-efu, nchọpụta MusicLab na-egosipụtakwa ihe ịma aka na ụzọ a: akwụ ụgwọ dị elu. N'ọnọdụ m, enwere m obi ụtọ na m ga-enwe ike iji ya rụọ ọrụ site na onye mmepụta weebụ nwere nkà bụ Peter Hausel maka ihe dị ka ọnwa isii iji wuo nnwale ahụ. Nke a ga - ekwe omume n'ihi na onye ndụmọdụ m, bụ Duncan Watts, nwetara ọtụtụ onyinye iji kwadoo ụdị nnyocha a. Nkà na ụzụ dịwanye mma ebe ọ bụ na anyị wuru MusicLab n'afọ 2004, ọ ga-adị mfe karị ịmepụta nnwale dị ka nke a ugbu a. Ma, ọ bụ nanị ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịchọta ego ndị a na-akwụ ụgwọ dị elu.
N'ikpeazụ, nchọpụta dijitalụ nwere ike ịnwe akụkụ dị iche iche dị oké ọnụ ahịa dị iche iche karịa nyocha nke analog. Ọ bụrụ na ịchọrọ ị ga-agba ọsọ dị ukwuu, ị ga-anwa gbalịa ibelata ego gị na-agbanwe dị ka o kwere mee nakwa n'ụzọ zuru ezu na ụzọ niile efu. Ị nwere ike ime nke a site na ịmepụta usoro nke nnwale gị (dịka, dochie oge mmadụ na oge kọmputa) na ịmepụta ihe ndị mmadụ chọrọ ịbanye na ya. Ndị nchọpụta nwere ike ịmepụta nyocha na atụmatụ ndị a ga-enwe ike ịgba ọsọ dị iche iche nke nyocha agaghị ekwe omume n'oge gara aga. Otú ọ dị, ike ịmepụta ugwo ugwo na ugwo nwere ike ịwelite ajụjụ gbasara iwu, ajụjụ nke m ga - ekwu ugbu a.